नेपाल हिन्दुहरुले भरिपूर्ण देश हो । नेपालमा अरु धर्मभन्दा हिन्दु धर्म मान्ने व्यक्तिहरुको बढी मात्रामा बसोबास रहेको छ । यसैगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड दशैं नजिकिँदै आएको छ । दशैं जस्तो महत्वपूर्ण चाडले हाम्रो पहिचान बनाएको छ । दशैं हिन्दुहरुको धार्मिक सहनशीलता हो भने नेपालीहरुको सम्पत्ति हो । दशैं संसारभरि बस्ने हिन्दुहरुको महान् चाड हो । सुनिन्छ कि दशैंमा नराम्रो काम गर्नेको अन्त्य हुन्छ र राम्रो काम गर्ने विजय हुन्छन् । प्रायजसो दशैं कात्तिक र असोज महिनामा पर्नै गर्दछ । दशैं जम्मा गरी १५ दिन मनाइन्छ । हिन्दु धर्म ग्रन्थहरुमा लेखिएअनुसार दशैंले मानिसमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको साथै सही बाटोतिर दोहो-याउँछ । तर आजको दिनमा सरकार, राजनीति नेता, जनप्रतिनिधिहरुले दशैंलाई दशा बनाउने सफलता हात पारेका छन् । अहिलेको सरकारले समृद्ध नेपाल बनाउने नाममा भ्रष्टाचारी नेपालको शीर्षक नेपालीलाई उपलब्ध गराएको छ । दशैं नेपालीहरुको सान हो भने नेपाली जनताले आफ्नो हक र हितको लागि लड्ने प्रतीक पनि हो । दशैंको अवसरमा लाखौँ मानिस आफ्नो जन्मथलो जाने गर्दछन् । आफ्नो जन्मथलो पुगेर आफूभन्दा ठूलोको हातबाट टीका लगाउनु हरेक नेपालीको रहर हो भने यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली जनताको यो हक पनि खोस्ने कोसिस गरेको छ । कसरी भन्दाखेरि दशैंको मुखमा आएर यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीको दबाबमा परेर भाडा बढाएको छ । सरकारले नै यसरी यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्ने हो भने यस्तो सरकारले कसरी नेपाली जनताको हितमा काम गर्छ ?
यसो हेर्दा त सरकार यातायात व्यवसायीको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिदैन र । यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको रेटभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिनेलाई कानुनको दायरा ल्याउने भनेको थियो तर अहिले पनि दैनिक कति मानिसबाट बढी भाडा लिएको स्पष्ट रुपमा सुनिन्छ यही त होला नि यातायात व्यवसायीहरु कानुनको दायरामा आएको र सरकारको अनुगमन ? यो एउटा उदाहरण मात्र हो के थाहा सरकारले यातायात व्यवस।यीको पक्षमा यस्ता कति काम गरेका छन् र जनताको आँखामा छारो हाल्ने कति काम गरेको छन् यसको जवाफ त सरकारसँगै हुनुपर्ने होइन र ? दशैंको टिकट खोल्नको लागि सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसँग हार खेप्नुप-यो भने जनतालाई बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता हात प-यो । जहिले पनि सरकार यसरी व्यवसायीको अगाडि झुक्ने हो भने सरकारलाई नै थाहा छैन नेपालको अर्थतन्त्र र कानुन कुन बेला र कति खेर ढल्ने हो । दशैंले हो कि आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दा दैनिकी उपभोग्य खाद्यान्न वस्तुहरुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल सरकार आपूर्ति विभाग र यससम्बन्धी विभिन्न निकायहरुको मिलेमतोमा दैनिकी उपभोग्य खाद्यान्न वस्तुहरुको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो । नेपालीहरुलाई बिहानबेलुका छाक टार्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरुको मूल्य असीमित रुपमा बढ्दा करौडौँ नेपालीे जनता मारमा परेका छन् । जहिले पनि सरकारको यस्तो बदनियतको कारणले गर्दा आम नागरिकहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
यहाँ त दशैंको मुखमा आएर सामानको भाउ बढाउनुपर्छ भनेर नेपाल संविधानमै उल्लेख गरिएको छ जस्तो भएको छ । अहिले एक किलो चिनीमा १२ रुपैयाँको दरले बढ्न गएको छ भने एक लिटर तेलमा २० रुपैयाँसम्म बढ्न गएको छ । यस्तो वस्तुमा कसरी र किन ह्वात्तै मूल्य बढ्न गयो भनेर न यसमा अनुगमन नै हुन सकेको छ न त यसको विश्लेषण आपूर्ति मन्त्रालयले नै दिन सकेको छ । दशैं भित्रिएसँगै नेपालको हरेक ठाउँमा खसीबोकाको माग पनि बढ्न थाल्छ । तर माग बढेअनुसार नेपाल सरकारले यसको पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन जसको कारणले गर्दा नेपाली जनताले खसीको मासु प्रतिकिलोमा हजारदेखि १२ सयसम्म तिर्न बाध्य छन् भने कतिले त खसीको मासु भनेर बाख्राको मासुसम्म बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ र सुनिन्छ पनि । यसरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन छ ? किन अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्न नसकेको ? दशैंको मुखमा आएर यसो दुई/चार वटा पसल चहार्नुलाई अनुगमन होइन देखावट भनिन्छ । जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि कतै आर्थिक चलखेल त लुकेर बसेको छैन यसतर्फ चाहिँ गम्भीर भएर नेपाली जनता आफैंले एक पटक विचार गर्नुपर्ला । दशैंको महँगी आकासिन पुगेको छ । यसरी महँगी बढ्दै गयो भने गरिब सर्वसाधारण भोकभोकै मर्नुभन्दा अरु कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन । जुन सरकारले जनतालाई सेवासुविधा दिने, जनताको हितमा काम गर्ने, देश र जनताको लागि ज्यान पनि दिन तयार छु भनी शपथ खान्छन् अहिले आएर यसरी सत्ता हात परेपछि भ्रष्टाचार गर्न त पाइँदैन नि ।
दशैं त नराम्रो काम, भ्रष्टचारिता हटाउने र सकारात्मक सोच ल्याउने प्रतीक हो यसैअनुरुप के थाहा यसपालिको दशैंले नेपाल सरकारका कर्मचारी, नेताको सोचमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि । दशैंजस्तो सकारात्मक चाडले मानिसहरुमा सद्भाव कायम गरे पनि नेपालको राजनीति र भ्रष्टचारिताको भावनाले यसलाई उल्टो तुल्याइदिएको छ । देशलाई कसरी सकारात्मक रुपमा विकास गर्ने र कसरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने भनी नेपाली राजनेता, जनप्रतिनिधिहरुले नसोचुन्जेल न विकास हुन्छ न त नेपाली जनताले सुविधाको सास फेर्न पाउँछन् । सरकारले जनतालाई सेवासुविधा दिने नाममा जहिले पनि दुःख दिने काम गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यो त अहिले जनताले भोगिरहेको समस्याको केही उदाहरण मात्र हो । नेपाली जनता अझै चुप लागेर बस्ने हो भने थाहा छैन नेपाली जनताले अझै कति यस्ता उदाहरणहरुको सामना गर्नुपर्ने हो । आशा गर्दछु कि यसपालिको दशैंले नेपाली नेता, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीहरुको सोचमा केही न केही परिवर्तन आउनेछ र नेपाली जनताले थोरै मात्रामा भए पनि राहतको सास फेर्न पाउनेछन् ।